Villas Kutengesa uye Kubhadhara muUnited States
maonero Dzimba Rakabudiswa 18 hours ago
Imba yekutanga yaive imba yekare yekuRoma yepamusoro-soro imba yenyika. Kubva kwayakabva mumusha weRoma, pfungwa uye basa remusha rakabva zvangoitika. Mushure mekudonha kweRepublican, villas vakava zvidiki zvekurima zviwanikwa, izvo zvaiwedzera kusimbiswa muLate Antiquity, dzimwe nguva zvinoendeswa kuChechi kuti ishandiswezve semamongi. Zvino zvishoma nezvishoma vanochinja zvakare kuburikidza neMiddle Ages vachipinda mudzimba dzepamusoro-yepasi dzimba dzimba. Mune parlance yemazuva ano, 'villa' inogona kureva mhando dzakasiyana-siyana uye hukuru hwenzvimbo dzekugara, kubva padhorobha "semi-rakabirirwa" mbiri villa kusvika munzvimbo dzekugara musango- dhorobha.